Momba ity lehilahy tsy mahazatra ity, Harold Waldwin Percival, dia tsy sahiran-tsaina loatra amin'ny toetrany isika. Ny mahaliana antsika dia ny zavatra nataony sy ny fomba nanatanterahany izany. Percival dia naniry ny tsy hijanona ho tsy azo tsinontsinoavina, araka ny nasongadiny tao amin'ny sasin-tenin'ny mpanoratra Fisainana sy faniriana. Satria noho izany dia tsy naniry ny hanoratra autobiographie izy na nanoratra biographie. Tiany hiorina amin'ny laoniny ny asa sorany. Ny tanjony dia ny fanamarinana ny fahamendrehana amin'ny fanambarany arakaraka ny fahalalan'ny fahaleovantena ao amin'ny mpamaky ary tsy misy fiantraikany amin'ny toetrany manokana an'i Percival.
Na izany aza, maniry ny hahalala zavatra momba ny mpanoratra iray ny olona, ​​indrindra raha misy fiantraikany goavana amin'ny heviny izy ireo. Satria lasa i Percival tamin'ny 1953, tamin'izy efatra amby valopolo taona, dia tsy misy olona velona intsony izay nahalala azy teo amin'ny fiainany taloha ary vitsivitsy ihany no mahafantatra ny antsipiriany momba ny fiainany taty aoriana. Nangoninay ireo zava-misy vitsivitsy izay fantatra; Na izany aza, tsy tokony ho raisina ho biography manontolo izany, fa fanontana fohy.
Harold Waldwin Percival dia teraka tany Bridgetown, Barbados, British West Indies, tamin'ny Aprily 15, 1868, tao amin'ny orinasa iray izay an'ny ray aman-dreniny. Izy no fahatelo tamin'ireo ankizy efatra, ary tsy nisy na iza na iza tafavoaka velona taminy. Ny ray aman-dreniny anglisy, Elizabeth Ann Taylor sy James Percival, dia mpivavaka be. Na izany aza, ny ankamaroan'ny zavatra henony fony mbola kely dia toa tsy nisy vidiny, ary tsy nisy valiny mahafa-po tamin'ireo fanontaniana maro napetrany. Nahatsapa izy fa tokony ho ireo izay efa nahalala, ary dia nanapa-kevitra izy fa hahita ireo "hendry" ary hianatra avy amin'izy ireo. Rehefa nandeha ny taona dia niova ny hevitr'ireo "Wise Ones", saingy ny tanjony dia ny hitomboan'ny fahalalany ny fahalalany.
Rehefa folo taona i Harold Percival, dia maty ny rainy ary ny reniny dia nifindra tany Etazonia, niorina tany Boston, ary avy eo tany New York. Nijery ny reniny nandritra ny telo ambin'ny folo taona izy mandra-pahafatiny tamin'ny 1905. Mpamaky be mpamaky izy, tena nampianarina ny tenany.
Nanjary liana tamin'ny Theosophy i Percival any New York ary lasa mpikamban'ny Theosophical Society tao amin'ny 1892. Nisara-kevitra io fiaraha-monina io taorian'ny nahafatesan'i William Q. Mpitsara tao amin'ny 1896. Percival tatỳ aoriana dia nandamina ny Theosophical Society Independent, izay nihaona mba handalina ny asa soratr'i "Madame Blavatsky" sy ny "soratra masina atsinanana."
Tao amin'ny 1893, ary indroa nandritra ny efatra ambin'ny folo taona nanaraka, Percival dia nanana ny traikefa tsy manam-paharoa amin'ny maha "mahatsiaro ny fahatsiarovan-tena", ny fahazavana ara-panahy sy ara-panahy. Hoy izy: "Ny fahatsiarovan-tena dia mampiseho ny 'tsy fantatra' amin'ilay olona efa nahatsiaro tena. Avy eo dia andraikitr'ilay olona hampahafantatra ny zavatra azony atao ny mahatsiaro ny fahatsiarovan-tena. "Nilaza izy fa ny hasarobidin'io traikefa io dia nahatonga azy ho nahalala momba ny foto-kevitra ara-tsaina iray izay nantsoiny hoe" fisainana marina. "Noho ireo zava-niainana ireo dia nanambara mihoatra noho ny tao amin'ny Theosophy izy, te-hanoratra momba azy ireo ary hizara izany fahalalana izany amin'ny olombelona.
Nanomboka tamin'ny 1904 ka hatramin'ny 1917, Percival dia namoaka gazety iray isam-bolana, The Teny, izay natokana ho an'ny firahalahiana misy eo amin'ny mahaolona ary nanana fiaramanidina manerantany. Mpanoratra maro an'isa tamin'io andro io no nandray anjara tamin'ny gazety ary nisy ny lahatsoratra rehetra nosoratan'i Percival. Ireo asa soratra tany am-piandohana dia nahazo azy toerana iray Iza no any Amerika?.
Tao amin'ny 1908, ary nandritra ny taona maromaro, Percival sy ireo namana maro dia nanan-tany ary nahitana saham-boankazo sy tany fambolena ary fiompiana tany amin'ny faritra avaratr'i New York. Rehefa namidy ny trano dia naharitra valo hektara izay nahitana trano kely iray tao Percival. Tany no nitoerany nandritra ireo volana fahavaratra ary nanokana ny fotoanany amin'ny asa sorany amin'ny sora-tanany.
Tao amin'ny 1912 dia nanomboka nanoratra lahatsoratra momba ny boky izay ahitana ny fomba fisainany manontolo. Satria ny vatany dia tsy maintsy najanona teo am-pandinihina, nanonitra ny fotoana rehetra izy. Ao amin'ny 1932 dia vita ny drafitra voalohany; Nantsoina izy io Ny lalàn'ny fisainana. Nanohy ny asa amin'ny sora-tanana hatrany izy mba hanazavana sy hanitsy izany. Tsy niriny ho boky mistery izy io ary tapa-kevitra ny hitafy ny asany amin'ny teny mifanentana tsara, na dia lava na lehibe aza ilay ezaka. Novana ny lohateniny Fisainana sy faniriana ary farany natonta tao amin'ny 1946.
Ity tontolon'ny pejy iray arivo ity dia novokarina nandritry ny efatra amby telopolo taona. Ity boky ity dia mirakitra ny momba ny olombelona sy ny tontolony amin'ny antsipiriany. Taorian'izay dia navoaka tao amin'ny 1951 izy Lehilahy sy Vehivavy ary Ankizy ary ao amin'ny 1952, Akora ary famantarana ary Ny demokrasia dia fitondram-panjakana. Ireo boky telo kely dia mifototra amin'ny Fisainana sy faniriana ary hiatrika ireo lohahevitra voafantina amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Tao amin'ny 1946, Percival, niaraka tamin'ny namana roa, dia namorona Ny Word Publishing Co., izay namoaka sy nanaparitaka ny bokiny voalohany. Nandritra io vanim-potoana io, niasa i Percival mba hanomana sora-tanana ho an'ny boky fanampiny, saingy nanolo-tena foana hamaly ny fanontaniana maro avy amin'ny mpifaninana izy.
Ny Word Foundation, Inc. dia niorina tamin'ny 1950 mba hampahafantarana ny mponina amin'izao tontolo izao ny boky rehetra nosoratan'i Harold W. Percival ary nanome toky fa hiaina mandrakizay ny lovany amin'ny maha-olombelona. Percival no nanolotra ny copyrights ho an'ny boky rehetra ao amin'ny The Word Foundation, Inc.
Tamin'ny March 6, 1953, Percival dia nodimandry noho ny antony voajanahary tany New York City herinandro vitsivitsy talohan'ny faha-50 taonany. Nofafàna ny vatany, araka ny faniriany.
Nolazaina fa tsy misy olona afaka hihaona ny Percival raha tsy nahatsapa fa nihaona tamin'ny olombelona tena niavaka izy ireo. Ny asany dia mampiseho ny fahatanterahany lehibe amin'ny firesahana ny tena fanjakana sy ny hery anaty, ny olombelona. Ny fandraisany anjara amin'ny olombelona dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny sivilizasionantsika sy ny fiaviantsika ho avy.